Date My Pet » 3 Tips kusika Best Online Dating Profile
Last updated: Nov. 18 2020 | 2 Maminitsi verenga
Kuisa kudanana Profile paIndaneti ingava chinhu exiting uye zvinotyisa pfungwa kamwechete. Zviri pachena kufara rinobva pfungwa kuti zvichida iwe chete kuti asangane kuti chinokosha munhu kuburikidza raiita muganhu-shoma Indaneti. Kutya kunobva kufunga kushamisika chaizvo kuisa kwenyu Profile. Kana uri wakafanana vanhu vakawanda, ungangodaro uchida kuisa mberi mufananidzo pachako zvakanakisisa, asi iwe chete havazivi sei kuita kuti. Richirondedzera kungava usanzwa uye dzinovhiringidza. Nepo zvingaita zvishoma akafanana kunyora nebutiro tsamba basa kushanda, chokwadi chinoramba kuti uri chaizvoizvo kuedza kukweva zvinogona misi-kwete zvinogona mabhosi! Nemhaka kuoma rakasikwa paIndaneti kufambidzana Profile, pane makambani chaizvoizvo vazhinji vakazvipira chimwe chinangwa-yokunyora Indaneti zvokufambidzana Profiles. sezvinei, pane nzira dzakawanda kuti unogona yako profile / "pamusoro pangu" chikamu yakawanda inonakidza, vasina kubhadhara 'nyanzvi' kuzviita here.
Taurira Stories: Zvichida chimwe chezvinhu zvinokosha Profile-kunyora mazano kurangarira, kuudza nyaya yako Profile ndechimwe chinhu yakaonekwa kuti ndeyechokwadi nzira yokuswedera vanhu vari kuenda nechido kanenge kuziva zvakawanda pamusoro pako. Mashoko akadai sokuti "Ndiri zvakanaka, mafaro, zvarisingazivi Guy "vane Generic uye chaizvoizvo zvinoratidzei zvishomanana nezvomunhu. zvisinei, kusarudza kupa pfupi anecdote kumirira mumwe nomumwe rondedzero iwayo achakuisa yekudyidzana zvikuru isingakanganwiki uye zvinofadza. (Semuyenzaniso, "Imwe nguva apo kumaruwa Ghana ..."). Ehe saizvozvo, Zvinokosha kuti urambe nyaya mipfupi; kwete chete ichi achachengeta yenyu Profile nyore verengeka, asi kunogona kupa mukana wakaisvonaka wokuti kukurukura nyaya nokuda zuva rako ("... Naizvozvo uchitaurira pamusoro iyoyo iwe ..."). Imwe nzira yokuita izvi kupa chaiwo mienzaniso nyore Generic mashoko. Semuyenzaniso, achiti "Someday ndingadai kunyange uve siginicha BBQ yangu mbabvu uye coleslaw" zvikuru isingakanganwiki uye personable pane achiti, "Ini chaizvo vanoda kubika kunze pamusoro grilli wangu."
Kumbirai Mibvunzo: A dzinongoitika pashure kune wokutanga pfungwa, nechokwadi chokuti yako kudanana Profile inopa mikana vamwe kukubvunza mibvunzo. Kana akataura zvakananga (sapamazuva, "Sunungukai ndibvunze zvakawanda pamusoro ...") kana kungotaura zvakavanda raireva, mumwe Profile kuti inokoka sevanoda mashoko akakwana pamusoro penyu kunoratidza kuti uri pachena, kukoka munhu uyewo. Nemamwe mashoko, kana wokugadzira wako Profile zvakanyorwa rinonzwika zvakakwana kwakakwana uye yakavharwa kure, ipapo vamwe vangafunga kuti ndiyo nzira yaunenge. Usazviomesera kufambidzana nzira yakazaruka nokuda inorira somunhuwo rakashama, kukoka munhu pachako.
Taura chokwadi: pakupedzisira, kutendeseka Zviripachena chinokosha wemafuta chero anobudirira kufambidzana ruzivo, kana paIndaneti kana kwete. Kana wako Profile makanyorwa saizvozvo kuti anotsanangura zviitiko kana "unyanzvi" kuti inongova okuwedzeredza chaicho, vamwe kuona kwenyu Profile zvimwe kukwanisa kuudza tichikufunga. Kutendeseka Kukurukurirana kumbobvira rutsoka zvakanaka utange musi. zvisinei, izvi hazvirevi kuti zvinokosha kuti iwe zvinopa uzere Kuziviswa panyaya zvose renyanzvi dzako nezvinhu paIndaneti kana. Semuyenzaniso, kwete kuda kuratidza vamuri basa nokuda kutya kuti vamwe vatsvake kuti kudanana imi kungoisikira yako mari chinoshanda chikonzero chete mamiriro, "In zvokurapa" pane kuti "Wemabhonzo" iri kurondedzera pachedu. Muchiitiko ichi, hakuna kuedza kwakaitwa kuti ani muri kurira "nani" kupfuura chokwadi.